Libanona: Arabnet niady hevitra momba ny hoavin’ny Aterineto Arabo… amin’ny teny Anglisy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Aogositra 2018 8:14 GMT
Vakio amin'ny teny Français, عربي, বাংলা, English
Sary natolotr'i Roobee
(Marihina fa tamin'ny 3 Aprily 2010 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Fihaonambe teknolojika natao tany Beirota ny 25-26 Martsa 2010 ny Arabnet 2010. Ity no fihaonambe iraisampirenena voalohany tamin'ny indostirian'ny Aterineto Arabo, izay nihaonan'ireo mpanapa-kevitra avy any Afovoany Atsinanana, Eoropa ary avy any Silicon Valley mba hiresahana ireo fironana farany sy ireo varavarana manomboka misokatra. Raha maro tamin'ireo mpandray anjara no nihevitra izany ho fahombiazana, dia nisy ny fanakianana lehibe izay nahatonga ny olona niresaka sy nanoratra momba izany nandritra ny andro maro taorian'ny famaranana ny fihaonambe. Ny olana: raha toa ka natokana ho an'ny tranonkala Arabo ny fivoriana dia ny teny Anglisy no nampiasaina ho fiteny ofisialy, ary natao tamin'ny teny Anglisy avokoa ny resaka tao amin'ny tranonkalany, ny adihevitra sy ny fampahafantarana rehetra.
Naneho ireto fanehoan-kevitra ireto tao amin'ny bilaoginy i Bent Masreya, iray amin'ireo bilaogera ofisialin'ny fihaonambe:
Nahoana no miteny Anglisy ny fihaonambe kanefa tontolon'ny Aterineto Arabo no resahana? […] toy ny fanontaniana izay nanahiran-tsaina ny rehetra nandefa izany tao amin'ny Twitter. Nahatsapa izany ho fanopana ny teny Arabo ny olona sasany, na ny tsy fanomezan-danja azy, ary ny hafa kosa nihevitra izany ho fampisehoana ny tsy fahaizan'ny Arabo maro miteny ny fiteniny araka ny tokony ho izy.
Niditra an-tsehatra naneho ny fahadisoam-panantenany sy ny fahagagany ilay mpandray anjara ao amin'ny Global Voices Alloush:
Hanombohana azy, niresaka momba ny elanelana misy eo amin'ny Atsinanana sy ny Andrefana ny fivoriana ary nilaza fa ny hanao dingana voalohany hanafoanana izany no tanjony. Tsy fantatro aloha hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahantsika manafoana io elanelana io raha toa ka tsy manam-pinoana amin'ny fitenin-drazany ireo mpikarakara ny fihaonambe, izay toa sangany amin'ny famoronana ara-tsaina Arabo.
Niaro ny fanapahan-kevitra hampiasa ny teny Anglisy ny bilaogy Not Green Data :
Fiteny ampiasaina ho azy amin'ny fandraharahana ny teny Anglisy amin'izao fotoana izao, ary raha te hisarika tokoa ny “Y Combinator”, “Reid Hoffman”, “Benchmark Capital” sy ireo mitovy aminy dia tsy maintsy ampiasainao ny haivarotra fiaingana amin'ny teny Anglisy.
Maro ireo nandefa fanehoan-kevitra tao amin'ny bilaogy: nifantoka tamin'ny fahombiazana ny sasany tahaka an'i Ziad Nasser, fa ny hafa kosa toa an'i Arabinator dia nanohy nitsikera ny kileman'ny Arabnet sy nitanisa ny sioka am-polony avy amin'ireo olona nizara ny fahasorenany .
Tsy nitsikera fotsiny ny fihaonambe noho ny fampiasana ny teny Anglisy na ny tsy firaharahiany ny firenen'i Maghreb (Alzeria, Tonizia, Libya, Maraoka ary Maoritania) i Mohamad Sahli fa nanambara ny tetikasany manokana:ihany koa:
Mba tsy hitoviana amin'ny fanakianam-poana ny teniko dia hoy aho hoe: nisy fotoana nikasa hikarakara fihaonambe toy ny “Le Web” tany Maraoka momba ny tranonkala Arabo aho. Hatramin'izao, nanapa-kevitra aho fa ataoko ny volana Janoary 2011 izany. Sady tsy manana traikefa aho no tsy mahay misarika olona na karine feno laharana finday an'ireo tompon'andraikitra ambony amin'ny orinasa iraisampirenena, saingy hanao izany aho.
Na dia teo aza ny adihevitra momba ny ArabNet 2010 dia maro no mbola niandry fatratra ny ArabNet 2011 manantena fa hitondra fanovana vaovao ho an'ny tranonkala miteny Arabo izany ary hahomby amin'ny fihoarana ireo olana izay nanohintohina ny andiany voalohany.